U-DJ kaSigiya Ngengoma, uZaizo, umisiwe kulolu hlelo lukamaskandi isithombe:FACEBOOK/ZAIZO
UMISIWE uDJ owadlala ingoma evaliwe kuSigiya Ngengoma oKhozini. Kuthiwa le ngoma ivalwe ngenxa yezinhlamvu zayo, okusolwa ukuthi ngezocansi.
Kusukela ngoMgqibelo owedlule ingxubevange yezingoma zikaZaizo kayidlalwa kulolu hlelo olusakazwa nguKhathide “Tshuthugodo” Ngobe noZimiphi “Zimdollar” Biyela.
Okhulumela iSABC, uMmoni Seapolelo ukuqinisekisile ukumiswa kwengosi kaZaizo emoyeni.
“I-SABC ithanda ukucacisa ukuthi uDJ Zaizo akaqashiwe futhi akanasivumelwano noKhozi, ngakho akaxoshiwe futhi akamisiwe yilo msakazo.
“Ubethumela ingxubevange yezingoma kuSigiya Ngengoma njengabanye bonke abasebenza ngokuzinikela.
Sicabange ukuthi baningi abaculi bakamaskandi abakhiphe umculo omusha, ithimba (likaSigiya Ngengoma) libe selithatha isinqumo sokuyimisa le ngosi ngala maholidi kaKhisimusi ukuze kudlaleke kahle izingoma ezintsha,” kuphetha uMmoni.
Isolezwe ngoMgqibelo libhale kabanzi ngokudlalwa kwengoma kaSwenkangemali, ehambisana noThandoluni Phungula weZingane Zoma, esihloko sithi Suka Phezu Kwami emuva kokuba yavalwa ngoba izikhulu zalo msakazo zazikholelwa wukuthi inezinhlamvu ezinemikhuba phakathi.
UMmoni wavuma ukuthi le ngoma yadlalwa ngephutha nguDJ Zaizo futhi waveza ukuthi kunophenyo oluqhubekayo.
Esebuzwa ukuthi luhamba kanjani uphenyo, uMmoni wabe esethi lolu daba ngolwangaphakathi kwaSABC.
Yize eminye imithombo yaqala yathi kusolwa abasakazi balolu hlelo kodwa Isolezwe NgoMgqibelo labuye lathola ukuthi laba basakazi bamsulwa kodwa ongene obishini nguphrojusa okwakufanele alalele kuqala le ngxubevange kaZaizo ngaphambi kokuyidlala emoyeni.
Kuthe kusenjalo kwase kumiswa ingosi kaZaizo, osanda kukhipha ingoma ayenze neMfezemnyama noDubai.